LMMS, oo ah aaladda lagu sameeyo muusikada, ayaa heleysa cusbooneysiin 4 sano kadib ah | Laga soo bilaabo Linux
LMMS, oo ah aaladda lagu sameeyo muusikada, ayaa heleysa cusbooneysiin cusub 4 sano kadib
Qalabka abuurka muusikada ee il furan LMMS wuxuu helay casriyeyn xasiloon oo cusub 4 sano kadib.
Noocii hore ee qalabkan muusikada waa LMMS 1.1.3 waxaana la sii daayay 2015. Hadda waxaa imanaya LMMS 1.2 oo leh horumarinno badan, warar iyo wax ka beddel.
Markii loogu yeero isku-xidhka 'Fruityloops' (FL Studio) bilaash ah, LMMS waxay ku barbaartay qalab weyn oo loogu talagalay muusikiisteyaasha leh aqoonsigooda. Abku wuxuu leeyahay a interface aad u dareen leh, qalab kala duwan iyo waxyaabo badan oo muuqaalada ah oo ay ku jiraan taageerada qalabka VST.
Maxaa ku cusub LMMS 1.2
LMMS 1.2 kooxdu waxay dhistay aasaas adag oo leh afar sano oo hagaajin ah, hagaajinta astaamaha waaweyn, iyo cusbooneysiinta isku xirnaanta.
LMMS 1.2 waxaan kaheleynaa hees cusub, hees cusub oo demo ah, EQ-ga oo leh muuqaalka muuqaalka muuqaalka, isku xidhka 'VST sync' oo u suurtageliyay asal ahaan, hagaajinta soo dejinta iyo dhoofinta MIDI, liiska saamaynta la kala sooci karo, iyo waxyaabo kale oo badan.
Loogu talagalay dadka isticmaala Linux gaar ahaan taageerada App Image ayaa lagu daray, oo wuxuu hagaajiyaa 32-bit VST 64-bit Linux ah oo leh VST sync karti leh. Isku xirka hadda wuxuu sidoo kale si weyn ugu shaqeeyaa bandhigyada HiDPI.
LMMS waa bilaash waana la heli karaa Windows, MacOS iyo Linux, waxaad kala soo bixi kartaa rakibayaha bogga rasmiga ah. Isticmaalayaasha Linux waxay ku heli karaan sii-deyntan ugu dambeysa sidii Sawir App ah, kaas oo u oggolaanaya inay haystaan ​​weel ay ku jiraan dhammaan ku-tiirsanaanta lagama maarmaanka ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » GNU / Linux » LMMS, oo ah aaladda lagu sameeyo muusikada, ayaa heleysa cusbooneysiin cusub 4 sano kadib
Nooca cusub ee KDE Plasma 5.16 ayaa yimid oo kuwanuna waa warkiisa